↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (2005)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။